७ बर्षका बालकले ज’लिरहेको घरबाट ब’चाए २२ महिनाकी बहिनी – Wow Sansar
७ बर्षका बालकले ज’लिरहेको घरबाट ब’चाए २२ महिनाकी बहिनी
December 29, 2020 87
एजेन्सी , अमेरिकाको टे’नेसी टे’जवेलमा ७ बर्षका बालकले ज’लिरहेको घरबाट २२ महिनाकी बहिनीलाई नि’कालेर ब’चाउन स’फल भएका छन् । बालक ए’ली डे’भिडसनले झ्या’लबाट बहिनी भएको कोठामा प्र’वेश गरेर २२ महिनाकी बहिनी ए’रिनलाई ब’चाउन सफल भएका हुन् । घर आ’गलागीबाट ध्व’स्त भएको छ । क्रिस र नि’कोलीले आफ्ना तीनजना बच्चाहरुलाई खाना खु’वाएर राती साढे ८ बजेतिर सु’तेका थिए । केही घण्टापछि घरमा ज’लेको ग’न्ध आयो । त्यसपछि नि’कोली ब्यू’झिइन् ।
उनी तत्काल आफ्ना ७ बर्षका छोरा एली र २ बर्षका छोरा ए’लाइजालाई लिएर बाहिर नि’स्किन् । एकैछिनमा घरमा आ’गोको ल’प्का फै’लियो । घरभित्र २२ महिनाकी बालिका ए’रिन त्यहाँ फ’सिरहेकी थिइन् । ए’रिनको बे’डरुमको वरपर आ’गो फै’लियो ।आ’गो र धुँ’वाका कारण त्यहाँ ढोकाबाट प’स्ने अवस्था नै रहेन ।क्’रिस र नि’कोली अ’लमलमा परे । त्यतिबेला क्रि’सले ७ बर्षका छोरा ए’लीलाई उ’चालेर झ्यालसम्म पु’र्याए ।७ बर्षका एली झ्यालबाट ए’रिनको बे’डरुममा पसे । त्यसपछि बालिका सु’तिरहेको झों’क घि’सारेर झ्या’लतिर ल्या’ए ।
त्यसपछि समयमै २२ महिनाकी बा’लिकाको उ’द्दार स’म्भव भयो ।एकैछिनमा २० जना अ’ग्नीनियन्त्रकहरु त आए । तर घर स’म्पूर्णरुपमा ज’लेर ध्व’स्त भयो ।झ्यालबाट छि’रेका ए’लीलाई सुरुमा सक्’दिन जस्तो लागेको थियो । उनले भने – ‘सुरुमा त मैले सक्दिन होला जस्तो लागेको थियो । तर म ब’हिनीको झों’कमा ता’नेर बा’हिर ल्या’उन सफल भएँ । मलाई ए’कदम ड’र लागेको थियो । तर म बहिनीको मृ’त्यु चा’हदैनथें ।’क्रि’स र नि’कोली दुबैजना पूर्व अ’ग्नीनियन्त्रक समेत हुन् । उनले ए’लीलाई ध’र्मपुत्रका रुपमा राखेका थिए ।
आ’गोले सबै ध्व’स्त भएपनि उनीहरु सबैजना स’कुशल ब’च्न सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । आ’गलागीबाट घरको सबै सा’मान ज’लेको छ भने तीनवटा का’रसमेत ध्व’स्त भएका छन् । उनीहरुसँग अब केहीपनि ब’चेको छैन ।गो’फण्डमीमा उनीहरुको सहयोगका लागि च’लाइएको अ’भियानमा २ लाख ६६ हजार ड’लर भन्दा धेरै सं’कलन भइसकेको छ ।
Prevश्रीमानलाई सँगै सुत्न नदिने र पकाएर नखुवाउने श्रीमतीलाई ६ वर्ष ‘जेल’
Nextभुक्तानी नपाइ सम्झौता भएको खबर सुनेर हृ’दयघा’तका कारण एक उखु किसान’को मृ’त्यु
यि हुन् कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकार, यसरी फेला पार्यो प्रहरीले (तस्बिर हेर्नुस्)
नासाको चेतावनीः भोली विनाशकारी एस्टोरोइट पृथ्वीसँग ठोक्किने !
नुहाउनासाथ नगर्नुहोस् यी पाँच गल्ती, नत्र झर्न थाल्छ तपाईंको कपाल
साह्रै दुखद खबर : एकाविहानै अस्पतालमा आ:गला:गी हुँदा १० नवजात शिशूको मृ:त्यु !
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3864)